काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्वसांसद एवं प्रसिद्ध उद्योगपति दिवाकर गोल्छाको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
सभापति देउवाले आज एक शोक विज्ञप्तिमार्फत गोल्छाको निधनबाट नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको र राष्ट्रले एक कुशल उद्योगपतिलाई गुमाएको उल्लेख गरेका छन् ।
साथै सभापति देउवाले स्व गोल्छाको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन् ।
पूर्वसांसद एवं प्रसिद्ध उद्योगपति गोल्छाको मङ्गलबार राति भारतको चेन्नइमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो । उनी मिर्गौलासम्बन्धी समस्याबाट पीडित थिए । स्व. गोल्छा वि.सं. २०६४ को संविधानसभामा काङ्ग्रेसका तर्फबाट सभासद् थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका स्व. गोल्छा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा एक सम्मानित व्यक्तित्व थिए ।